December 2011 | အ င်္လ ကာ ည
၂၀၁၂ ကိုအပြုံးလေးများနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်
Create G-talk အကောင့်လုပ်ရာဝယ်
1:03 AM | Labels: ဆောင်းပါး
လူတစ်ယောက်၏ ဘ၀မှာရှိရှိသမျှ အရာအားလုံးကို စိုးရိမ်ပူပန်နေမည်ဆိုပါက ထိုသူရဲ့ ဘ၀ဟာအ တော်ငြီးငွေ့ ပျင်းရိစရာကောင်းပေလိမ့်မယ်။နှစ်တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိအောင်သောက တွေ သိပ်များနေရင် လူဖြစ်ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါ့မလား။
ဒါကြောင့် အလွန်တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အချိန်တွေမှာ အာရုံတွေ ခံစားမနေတော့ဘဲ မကြာမီ ကူးပြောင်းတော့မယ့် နှစ်သစ် ၂၀၁၂ ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါ။
ရယ်မောခြင်းဟာအသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း ပြေလျော့သွားစေပါတယ်။ ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်တဲ့ ခုခံအားစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေလည်းခံစားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရယ်မောခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလေးစားမှုတွေကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည် ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့ အပြင် သစ်လွင်သောအကြံဥာဏ်ကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာစေပြီး မှတ်ဥာဏ်တွေ လည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။
မျက်နှာကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်း အတွက်ဆိုရင် ရယ်မောခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရယ်မောခြင်းဟာ သင့်ရဲ့မျက်နှာကို လန်းဆန်းနုပျိုစေတယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ရယ်မောခြင်းဟာ နှလုံးသားရေးရာအတွက်လည်းအကျိုးပြုပြန်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့သူကိုသာနှစ်သက်ကြပါတယ်။နှလုံးသားထဲမှာဟာသဥာဏ်လေးကိန်းအောင်းနေကာ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို သဘောကျတယ်။
ရယ်မောခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝဆေးတစ်ခွက်ရဲ့ အာနိသင်တွေကိုသင်ချစ်တဲ့မိသားစု၊သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့အတူမျှဝေရင်းနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါ။
3:30 AM | Labels: ဆောင်းပါး
Honeymoon ဆိုတာကို မင်္ဂလာဆောင်ပြီးစမှာ ခရီးထွက်ကြတဲ့ ပျားရည်ဆန်းခရီးလို့ သိထားကြပါတယ်။ ဟုတ်တော့လည်း….ဟုတ်ပါတယ်……… ဒါပေမဲ့ ဒီထက်မက ပြည့်စုံတဲ့လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေရှိနေပါ တယ်……..
စောစောပိုင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ honeymoon (ဟန်းနီးမွန်း) ဆိုတာ လက်ထပ်ပြိးပြီးချင်း သစ်လွင် လတ်ဆတ်သော ကာလကို ဆိုပြီး၊ ဒီတစ်လတာကာလကို ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်. စောဦးပိုင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားအရ honey moon လို့ဆိုပြိး ၁၅၄၆ ခုနှစ်မှာ အစောဆုံးတွေ့ရပါတယ်။
ဟန်းနီးမွန်းနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့အဆိုတစ်ရပ်ကတော့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်သည် လက်ထပ်ပြိးစ ကာလမှ စစ်မှုထမ်းခြင်းပြုရန် မလိုအပ်ဘူး။ ထို့တူစွာ public duty ခေါ် လူထုနှင့် စပ်ဆိုင်သော အလုပ်တွေကိုလည်း မလုပ်ဘဲ နေသင့်လှပါသတဲ့. လက်ထပ်ချိန်မှစလို့ တစ်နှစ်တာကာလကြာ၊ ဇနီးသည်အနားမှာ နေထိုင် သင့်သတဲ့။
အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအရ လက်ထပ်ပြီးစ ဇနီးမောင်နှံတွေ ခွင့်ယူပြီးခရီးထွက်ကြတာ (၁၉)ရာစုနောက် ပိုင်း၊ဂရိတ်၊ဗြိတိန်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် မူလအော်ရီဂျင်နယ်က အိန္ဒိယလူ့မလိုင်မလွှာက လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ မှာက အပျော်ချည်းသက်သက်မဟုတ်ပါ…. မင်္ဂလာပွဲကို မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ဆွေမျိုး တွေရှိရာ ရပ်ရွာကို သတိုးသမီး ဇနီးအသစ်စက်စက်ကို ခေါ်ငင်ပြသတာဖြစ်ပါတယ်….။ bridal tour လို့ ခေါ်ပြီး မြန်မာမှာက ဆွေပြမျိုးပြ လို့ ဆိုကြပါတယ်…… ဤသို့ဇနီးပြခရီးမှာ သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးများ ကိုပါ ခေါ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်. ။အိန္ဒိယ မှသည် ဥရောပကို ကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၂၀ ခုနှစ်ခန့် တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်လာကြပါပြီ…….English-style voyage လို့ဆိုပြိး voyageala focon anglaise လို့ခေါ်ပါတယ်။
ယခုကာလကဲ့သို့လက်ထပ်ပြီးစ ဇနီးခင်ပွန်းအသစ်စက်စက် ပျားရည်ဆမ်းခရိးထွက်ကြတာ Belle Époque (ခေတ်မီသူများ အစုလိုက်ခရီးထွက်တတ်ကြသော ကာလဦးပိုင်း) ကာလမှာ ပျံ့နှံ့သွားတယ်.။ ပျံ့နှံ့စမှာ ဇနီးအသစ်စက်စက်ရဲ့ ကိုယ်စိတ်သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှုကို ငဲ့ကွက်စရာမလိုသယောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်……
အဆိုပါ စဦးပိုင်းကာလတွေမှာ ဟန်းနီးမွန်းခရီးသွားကြတဲ့နေရာတွေကတော့ အီတလီရှိ French Riviera, Rome ၊ Verona နှင့် Venice တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ဟန်းနီးမွန်းဆိုတာ ပထမည( မင်္ဂလာဦးည) ကတည်းက စပါတယ်.။ ဘယ်လိုစလဲဆိုရင် မင်္ဂလာပွဲမှသည် ခရီးထွက်မယ့်သင်္ဘော (သို့)ရထား (သို့) လေယာဉ်ဆီကို သွားကြကတည်းက ဟန်းနီးမွန်းခရီးအစပါ…..
၂၁ ရာစုမှာတော့ စုံတွဲအများအပြားသည် (၁)ရက်မှ (၃)ရက်ကြာပြီးမှသာ ခရီးစလေ့ရှိကြပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ မင်္ဂလာပွဲများမှာ ပင်ပန်းထားသမျှ (၁)ရက်၊(၂)ရက်၊(၃)ရက်ကြာ ခ၀ါချပြိးမှ ဟန်းနီးမွန်းစတင်တဲ့သဘောပါ……….။
Honeymoon စကားလုံးအတွက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။
“လက်ထပ်ပြီးစ (၁)လတာ ကာလသည် အချိန်မြိန်ဆုံးဖြစ်တယ်”
(The Merriam-Webster dictionary) (1546)ခုနှစ်………………..။
ဟန်းနီးမွန်းခရိးသည် အသစ်စက်စက် ဇနီးမောင်နှံအတွက် အတူကုန်ဆုံးတဲ့ ပထမဦးဆုံးကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Samuel Johnson ဆိုသူရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကတော့……….. “လက်ထပ်ပြိးစ (၁)လတာ ကာလ ဆိုတာ ဘာမှမလိုသည့်ကာလဖြစ်ရာ၊ (၁)လတာဟူသော အချိန်ကန့်သတ်ချက်နှင့် မသက်ဆိုင်၊ သို့သော်…… လမင်းကြီးက ဆန်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ လပြည့်သည့်ဖြစ်စေ၊ မပြည့်သည် ဖြစ်စေ၊ လက်ထပ်ပြီးစ အားလပ်ရက်တွေကို အိမ်ပြန်ချိန်မရောက်မချင်း ကုန်ဆုံးပစ်လိုက်တာကို” ခေါ်တယ် ………. လို့ဆိုထားပါတယ်………………
3:41 AM | Labels: နည်းပညာအကြောင်း
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဂျီတော့အကောင့်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းလို့ ဂျီမေလ်းကနေ Create Account ကိုနှိပ်လိုက်တော့ အရင်တုန်းက ဂျီတော့အကောင့် Create လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ အခုအကောင့်လုပ်တာပုံစံလေး နည်းနည်းကွဲသွားတာကို တွေ့ရလို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဒါက Create account ကိုနှိပ်ပြီးပထမဆုံးတွေ့ရမယ့် မြင်ကွင်းတစ်ခုပါ။ ပုံစံတွေကို ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့ Next step ကို နှိပ်ပေးပါ။
(၂) ဒါကတော့ next step ကိုနှိပ်ပြီး ပေါ်လာမယ့် ဒုတိယအဆင့်ရဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုပါ။ ဒုတိယအဆင့်မှာ ဂျီတော့ရဲ့ Add Profile Photo နေရာမှာ မိမိဖော်ပြချင်တဲ့ပုံကို ကို တစ်ခါတည်းUpload လုပ်လို့ရပါတယ်။ ပြိးရင်တော့ Next step ကိုဆက်လက်နှိပ်ပေးပါ။
(၃) ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ မြင်ရမယ့် မြင်ကွင်းတစ်ခုပါ။ Continue to G-mail ကိုနှိပ်ပြီး မိမိရဲ့ ဂျီမေလ်း အကောင့်အသစ်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီ